Topnepalnews.com | देउवाका चार अप्ठ्यारा,आफ्नैमा आकांक्षी धेरै पौडेल र सिटौला समूहलाई मिलाउन सकस
देउवाका चार अप्ठ्यारा,आफ्नैमा आकांक्षी धेरै पौडेल र सिटौला समूहलाई मिलाउन सकस
Posted on: June 05, 2016 | views: 475
काठमाडौं,जेठ २३ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ मसान्तभित्र विभाग र केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन टुंग्याउने भएका छन् । आकांक्षी धेरै रहेकाले विवाद हुने देखेपछि देउवाले तत्काललाई पदाधिकारी मनोनयन थाती राख्न लागेका हुन् । कांग्रेस विधानमा महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभाग तथा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधानअनुसार नै पदाधिकारीसहित विभाग गठन, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन एकैपटक टुंग्याउने देउवाको तयारी थियो । तर, अहिले ४२ विभाग गठन र १४ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई–तीन सदस्य बाँकी राखेर मनोनयन गर्ने तयारी उनको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, ज्येष्ठ राजनीतिकसभा पनि गठन गर्ने तयारी छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ।
देउवाका चार अप्ठ्यारा
१. उपसभापतिमा निधि कि खड्का
उपसभापतिमा खुमबहादुर खड्का र विमलेन्द्र निधि प्रमुख दाबेदार छन्। तराई–मधेसको प्रतिनिधित्व, संगठनमा पकड र भावी उत्तराधिकारीका रूपमा देउवाले निधिलाई उपसभापति बनाउन चाहेका छन्। महाधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेका खड्काले पनि उपसभापतिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । तर, हिन्दूराज्यको अभियान चलाएका खड्काको एजेन्डा डा. शशांक र शेखर कोइरालासँग मिलेकाले देउवा सशंकित छन् । भ्रष्टाचार कसुरमा जेल सजाय भोगेका खड्कालाई पद दिँदा हुनसक्ने आलोचनाबाट पनि देउवा जोगिन चाहन्छन् । संसदीय बोर्डमा राखेर खड्कालाई मनाउने तयारी देउवाको छ । तर, आफूलाई बोर्डमा राखेमा महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा क्रमश: पूर्णबहादुर खड्का र पुष्पा भुसाललाई राख्नुपर्ने दबाब खड्काले दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
२. महामन्त्रीमा दुई, सहमहामन्त्रीमा धेरै
महामन्त्रीमा देउवा पक्षकै पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की दाबेदार छन् । देउवाको पहिलो प्राथमिकतामा कार्की रहेको स्रोत बताउँछ । तर, उपसभापतिको अप्ठेरो मिलाउने क्रममा खुमबहादुर महामन्त्री बसेमा अरूको ढोका बन्द हुनेछ । सहमहामन्त्रीमा भने देउवा पक्षकै डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, एनपी साउद दाबेदार छन् । उनीहरूमध्ये कसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा देउवा अप्ठेरोमा छन् ।
३. पदाधिकारीमा पौडेल पक्षको पनि दाबी
पौडेल पक्षले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमध्ये एकमा आफ्नो दाबी रहने बताउँदै आएको छ । ‘पदाधिकारीमा हाम्रो दाबी स्वत: रहन्छ । कसरी सन्तुलित गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र बडूले भने, ‘पदाधिकारी चयन गर्दा विधानले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन खोज्छ । सबैलाई चित्त बुझाउनुभएन भने सभापतिलाई गाह्रो पर्ने देखेका छौं ।’
४. सबै पक्षलाई मिलाउनुपर्ने चुनौती
सभापति देउवाले महाधिवेशनअघि नै पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य हुने घोषणा गरेका थिए । सभापतिमा निर्वाचित भएपछि घोषणा कार्यान्वयन गर्न पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र विभाग गठनमा अर्को पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर जानुपर्ने चुनौती देउवालाई छ । तर, आफ्नै पक्षका आकांक्षी धेरै रहेकाले पौडेल पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई पनि समेट्न उनलाई सकस परेको छ ।